Loza mitatao eny amin’ny faritra avo :: Tandindonin’ny fihotsahan’ny tany indray Manjakamiadana sy ny manodidina • AoRaha
Loza mitatao eny amin’ny faritra avo Tandindonin’ny fihotsahan’ny tany indray Manjakamiadana sy ny manodidina
Miverina mitatao ny loza. Fantatra fa tandindonin’ny fihotsahan’ny tany ny eny Manjakamiadana sy ny manodidina, taorian’ny fitsirihana nataon’ny avy ao amin’ny Birao nasionaly misahana ny loza voanjanahary (Bngrc) niaraka tamin’ny teknisiana avy ao amin’ny Ivon-toerana nasionaly manara-maso ny fihetsehan’ny tany na mpandinika ny jeofizika (Ioga). Tsy azo antoka intsony ny hipetrahana amin’ireo faritra avo ireo.
«An-dalana amin’ny fahapotehana tanteraka ny ampahany amin’ireo vato amin’iny Ampamarinana iny. Hita fa efa misy ny vato mitriatra. Maromaro ihany koa ireo vatobe mitokantokana, izay mihamanify ny tany hipetrahany ka mety hikodia. Isan’ny atahorana hampihetsika ny vato ihany koa ny fivezivezen’ireo fiara vaventy amin’iny faritra iny», hoy ny kolonely Andriakaja Elack Olivier, sekretera mpanatanteraky ny Bngrc.
Tafiditra ao anatin’ny faritra mena ny atsinanan’ny Rova sy ny atsimo-andrefana ary ny faritra avaratry ny vohitr’i Manjakamiadan, amin’ny ilany Andrefana.
Efa miverina tsikelikely eny amin’ny trano fonenany anefa ireo fianakaviana tafiditra ao anatin’ilay faritra mena, izay tsy azo onenana intsony. Hiditra amin’ny vanim-potoanan’ny fahavaratra kosa isika atsy ho atsy. « Rehefa avy ny orana vao mety hisy ny loza na ny fihotsahan’ny tany fa mbola tsy amin’izao fotoana izao », araka ny nambaran’ny Dr Andriamirado Lalah, teknisiana ao amin’ny Bngrc.
Misy vatobe milanja efajato taonina eo ho eo ihany koa eny amin’ny faritra fihadiam-bato etsy Ambohimangakely, izay ahatahorana hianjera. Ao anatin’ny toerana fihadiam-baton’olona izy io saingy misy tranon’olona maro eo ambanin’ilay toerana. « Raha mikodia ny vato dia ho potika daholo ireo trano fonenana ireo. Nandray fanapahan-kevitra ny Bngrc tamin’ny famoriana ny lehiben’ny distrika, ny kaominina, ny fokontany ary ny tompon’ny fihadiam-bato amin’ny tokony hamakiana an’io vatobe io », araka ny fanampim-panazavana.
Basket-ball- Fifaninanam-pirenena :: Fantatra ireo ekipa tafakatra amin’ny ampahefa-dalana
Fahazarana manjakazaka ara-politika :: Lohalaharana amin’ny fidongian- toerana hatrany Ravalomanana Marc